19 Maalmaha feestooyinka ah - Ku soo dhowow Nederland
C Nolosha maalin kasta‎ > ‎
Maalmaha Feestada ee waddanka
Sida waddamada kale ee adduunka ayaa Nederland maalmo fasax ah leedahay, maalmahaasoo qof kastaa fasax yahay. Fasaxa ugu horreeya ee sannadku waa 1-da Janaayo. Maalintan waxaa kaloo loogu yeedhaa maalinta sannadka cusub. Dad badan oo reer Nederland ahi qoysaskooda ayay booqdaan, oo sannad cusub u rajeeyaan.
Maarso iyo Abriil (ma jiraan maalmo feesto ah oo go'ani) Pasen ayaa loo dabaaldegaa. Berigii hore waxay ahayd feesto masiixiyiinta oo keliya ku eg. Masiixiyiinta ayaa u dabaaldegi jirey in Ciise Dhimashadii ka saro-kacay, laakiinse maalmahan dadka badankoodu saa uma arkaan ama ugama fekeraan. Iyaga maalin fasaxa uun bay u tahay. Dukaanada badankooda waxaad ku arkaysaa Paashaas. Waxaa kaloo la cunaa ukun ka samaysan chocolate. Xafladan Pasen-ka laba maalmood ayaa loo dabaaldegaa.
30-ka abriil waa maalinta boqorrada. Maalintii ay boqorradayadu dhalatay ayaa loo dabaaldegaa.
Bisha May (40 maalmood pasen-ka dabadeed) waa hemelvaart. Tannina waxay berigii hore ahayd xaflad masiixiyadeed. Masiixiyiinta ayaa u dabaaldegi jirey maalintii uu Ciise samada tegey. Laakiinse dad badan oo reer Nederland ah waxay u tahay maalin kale oo fasax ah.
May ama juunyo (10 maalmood hemelvaart dabadeed) waa Pinksteren. Masiixiyiintu waxay u dabaaldegaan markii dadka rumaystayaasha ah Ruuxa Quduuska ah la siiyey. Laba maalmood oo isku xiga ayaa la dabaaldegaa. Laakiinse dadka aan masiixiyiinta ahayn tani macno gaar ah uma leh.
Maalinta Kirismas-ka (25 iyo 26 December) qof kastaa wuu dabaaldegaa. Berigii hore tanina xaflad Masiixiyeed bay ahayd, oo waxay u dabaaldegi jireen maalintii Masiixu dhashay. Dadka reer Nederland waa u maalin la nasto oo raashin macaan la isla cuno. Dadka reer Nederland badankooduna geedka kirismaska ayay gurigooda dhigaan. Geedkani wax diinta ku salaysan maaha.
Maalmaha kale ee feestooyinka ah (laakiinse aan fasaxa ahayn)
4-ta may waxaa la xasuustaa dadkii ku dhintay Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Tan waxaa lagu magacaabaa Maalintii xasuusta ee waddanka. 5-ta may, waa Maalintii Xoraynta, waxaana loo dabaaldegaa markii uu Dagaalkii Labaad ee Adduunku dhammaaday. 5-ta december waxaa loo dabaaldegaa Sint-Nicolaas. Gaar ahaan carruurta ayay maalintani xiise gaar ah u leedahay. Dadku hadiyado ayay isa siiyaan. Xafladan iyaduna wax shaqo ah diinta kuma leh. Oudejaarsavond ama habeenka sannadka cusub ka horreeya waxaa loo arkaa habeen xaflad ah. Qoysasku sannadkii hore ayay soo xidhaan. Badanaa waxay dadku cunaan oliebollen met poedersuiker, habeenkana dab ayaa waxyaalaha qarxa laga qarxiyaa.